भर्खरै निर्मलाकाण्डका मुख्य संदिग्धकाे नाम बाहिरियाे, सबैले साेचभन्दा फरक निस्कियो परिणाम! – PathivaraOnline
Home > Uncategorized > भर्खरै निर्मलाकाण्डका मुख्य संदिग्धकाे नाम बाहिरियाे, सबैले साेचभन्दा फरक निस्कियो परिणाम!
हत्यारालाई पक्राउ गरी कारवाही अगाडि बढाउने जिम्मेवारी पाएको सरकारी निकाय नै हत्यारालाई जोगाउन लागेपछि न्यायका लागि स्थानीयले आन्दोलन नै गर्नुपर्‍यो । ‘निर्मलाका निम्ति न्याय’ माग्दै देशभर नै आन्दोलन भयो ।
यसबीचमा सरकारले गृह मन्त्रालयका सह–सचिव हरिप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्‍यो । समितिले मंगलवार गुपचुप रूपमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषय गोप्य राखिएको छ । तर लोकान्तरलाई गृह मन्त्रालय स्रोतबाट प्रतिवेदनमा उल्लेख केही विषय स्रोतबाट प्राप्त भएको छ ।
निलम्बित एसपी विष्ट मुख्य संदिग्ध
घटनाका सबै तथ्य केलाएको समितिले अन्ततः एसपी विष्टलाई मुख्य संदिग्धको सूचीमा राखेको हो । ‘तत्कालीन एसपी विष्टलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गर्दा घटनाका सबै तथ्य खुल्ने संकेत गरेर उनलाई मुख्य संदिग्धको सूचीमा राखिएको छ,’ गृह मन्त्रालय स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।
विष्टलाई मुख्य संदिग्ध बनाइनुका ५ आधार
समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा विष्टलाई मुख्य संदिग्ध बनाइनुको आधार समेत उल्लेख गरेको छ ।
१) निर्मला हराएको साँझदेखि नै एसपीको चलखेल
परिवारको भनाइका आधारमा निर्मला पन्त साउन १० गते बिहान ११ बजे घरबाट साथीकोमा जान्छु भनेर निस्किएकी थिइन् ।
बहिनीलाई साथी रोशनी बमको घरमा गएर गाइड र अम्बा लिएर आउँछु भनेकी निर्मला दोस्रो दिन भीमदत्तनगरपालिका– १८ स्थित उखुबारीमा मृत फेला परिन् ।
निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी बिहान १० बजेतिर निर्मलालाई पसलमा राखेर सामान किन्न बजार गएकी थिइन् । १ बजेरित घर फर्किँदा निर्मला रोशनीको घर गएको खबर पाइन्, आफ्नी कान्छी छोरीबाट । साँझ ६ बज्दा पनि निर्मला घर नफर्केपछि दुर्गादेवी खोजीमा जुटिन् ।
शुरूमा रोशनी बमको घर पुगेकी दुर्गादेवी पछि अस्थायी प्रहरी बिट सालघारी पुगिन् । छोरीको खोजीका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय गड्डाचौकीदेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा फोन गर्दा दुर्गादेवीलाई एकै जवाफ आयो, ‘बिहान हराएकी छोरीलाई यति राति आएर खोज्ने हो ? अब भोलि उज्यालो भएपछि आउनु ।’
उच्चस्तरीय छानबिन समितिको अनुसन्धाबाट एसपी विष्टले निर्मला हराएको साँझदेखि नै मातहतका प्रहरी कार्यालय र युनिटका इञ्चार्जहरूलाई बोलाएर निर्मलाको खोजीका लागि उजुरी आए नलिन भनेर निर्देशन दिइसकेको पत्ता लागेको छ ।
‘एसपी विष्टले १० गते राति नै मातहतका प्रहरी कार्यालयका प्रमुखलाई निर्मलाको उजुरी नलिन निर्देशन जारी गरेको देखियो भनेर समितिले ब्रिफ गरेको छ,’ गृह मन्त्रालय स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘उनले ११ गते बिहान नै कतिपय प्रहरी युनिटका प्रमुखको सरुवा समेत गरेको देखिएको भनेर समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।’
२) हतारहतार प्रमाण नष्ट
निर्मला हराएको दोस्रो दिन, (साउन ११) गते बिहान ९: २५ तिर स्थानीयले उखुबारीमा निर्मलाको शव देखेका थिए, घोप्टो पल्टिएको अवस्थामा । शवभन्दा केही टाढा सडकबाट देखिने गरी । सानो खोलामा साइकल भेट्टिएको थियो । खोलाको किनारमा किताब र अम्बाको दाना भेटिएको थियो ।
बिहान स्थानीयले शव भेटिएपछि प्रहरीलाई खबर गरे जिल्ला प्रहरी कार्यालयको मुद्दा फाँटका इन्सपेक्टर एकेन्द्र खड्का आएर घटनास्थल वरपर हेर्न थाले । आफूसँगै आएकी एक महिला प्रहरीलाई हातले केही इशारा गरे, महिला प्रहरीले निर्मलाको सुरुवाल धुन थालिन् । घोप्टो पल्टिएको निर्मलाको शवलाई उत्तानो पल्टाइयो । महिला प्रहरीले उखुबारीकै धमिलो पानीले निर्मलाको योनी सफा गर्न लागिन् ।
छानबिन समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार ‘क्राइम सिन’बाटै प्रमाण नष्ट गरिएको थियो । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एसपी विष्टकै प्रत्यक्ष निर्देशनमा सबै प्रमाण नष्ट गर्ने काम भएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
एसपी विष्ट वारदातस्थलको मुचुल्का उठाउनेदेखि निर्मलाको शव जलाउने कार्यसम्मका कार्यमा प्रमाण नष्ट गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर लागेको छानबिन समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
३) ‘अनुभवी अपराधी’बाट शव व्यवस्थापन
साउन ११ गते बिहान ९ः२५ बजेतिर स्थानीयले उखुबारीमा घोप्टो परेको अवस्थामा निर्मलाको शव फेला पारेका थिए । शवको केही टाढा खोलामा साइकल थियो भने खोला किनारमा किताब र अम्बाको दाना थियो ।
उखुबारीमा निर्मलाको आधा शव पानीमा डुबेको अवस्थामा थियो भने किनारमा फेला परेका किताब, जस्ताका तस्तै थिए । जबकि साउन १० गते राति मुसलधारे पानी परेको थियो । त्यत्रो पानी पर्दा पनि निर्मलाका किताब–कापी भने भिजेका थिएनन् ।
उच्चस्तरीय छानबिन समितिले निर्मलाको हत्या उखुबारीमा नभई अन्य कुनै स्थानबाट ल्याएर उखुबारीमा ‘शवको व्यवस्थापन’ गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । ‘प्रमाण नष्ट गर्ने उद्देश्यले ‘अनुभवी अपराधी’ले शवलाई घोप्टो पारेर राखेको देखियो,’ समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको विषयलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘शवको व्यवस्थापनका सवालमा देखिएका कतिपय तथ्यबाट पनि त्यसमा एसपी विष्टको भूमिका देखिन्छ ।’
‘निर्मलाको हत्या उखुबारीमा भएको भए मृत्यु हुँदा उनको फोक्सोमा केही मात्रामा भएपनि पानी जानुपर्ने हो । तर त्यहाँ त्यस्तो देखिएन,’ प्रतिवेदनमा स्वास्थ्यकर्मीको समेत रायलाई उल्लेख गरेर भनिएको छ, ‘सुरक्षित ठाउँमा हत्या गरेर उखुबारीमा ल्याएर शव व्यवस्थापन गरिएको हुनसक्छ ।’
४) आफन्तलाई धम्की, स्थानीयसँग गलत व्यवहार
छानबिन समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार एसपी विष्टले निर्मलाका आमा–बुवा र आफन्तलाई भेटेरै पटक–पटक धम्की दिएका थिए ।
एसपी विष्टले पेस्तोल ताकेरै निर्मलाको शव नउठाए ‘गोली खानुपर्ला’ भन्दै निर्मलाका बुवा यज्ञराजलाई धम्की दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै मानसिक स्वास्थ्य ठीक नभएका दिलिपसिंह विष्टविरुद्ध किटानी जाहेर दिन भनेर पनि एसपी विष्टले निर्मलाका अभिभावकलाई चर्को दबाब दिएको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उच्चस्तरीय छानबिन समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार एसपी विष्टले केही व्यक्तिलाई निर्मलाको हत्या सकार्न प्रलोभन समेत दिएका थिए । निर्मला प्रकरणमा कञ्चनपुर प्रहरीले दिलिप विष्टका अलावा भीमदत्त नगरपालिका– २ का २१ वर्षीय चक्रदेव बडू र १८ वर्षीया हेमन्ती भट्टलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । हिरासतमा लिएर उनीहरूलाई निर्मलाको हत्या आफूले गरेको भनेर स्वीकार्न धम्कीसँगै प्रलोभन दिइएको पनि समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
एसपी विष्टले निर्मलाको न्यायका लागि आन्दोलन गर्ने व्यक्तिलाई समेत गोली ठोकिदिने भनेर धम्की दिएको विषय उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एसपी विष्टले अधिकारकर्मी र केही स्थानीयलाई नियन्त्रणमा लिएर गलत व्यवहार गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
५) आदेश नहुँदा पनि गोली प्रहार
कञ्चनपुर प्रहरीले निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्यामा संलग्न भन्दै भदौ २ गते भीमदत्त नगरपालिका–१९ का दिलिपसिंह विष्टलाई पक्राउ गरी भदौ ४ गते सार्वजनिक गर्‍यो ।
दिलिपलाई सार्वजनिक गर्दा वितरण गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा प्रहरीले उनको मानसिक अवस्था ठीक नभएको भनेको थियो । दिलिप पक्राउ परेको दोस्रो दिनदेखि नै स्थानीयले आन्दोलन शुरू गरे ।
वास्तविक अपराधीलाई जोगाउन दिलिपलाई पक्राउ गरिएको भन्दै स्थानीयले आन्दोलन चर्काए । स्थानीयको आन्दोलनमा प्रहरीले शुरूदेखि नै अत्यधिक बल प्रयोग गरिरहेको थियो । भदौ ७ गते त अन्धाधुन्ध गोली चलायो । प्रहरीको गोली लागेर ४ जना गम्भीरसहित करीब १ दर्जन घाइते भए ।
उच्चस्तरीय छानबिन समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार स्थानीय प्रशासनको आदेश उल्लंघन गर्दै एसपी विष्टको आदेशमा आन्दोलनकारीमाथि गोली चलाइएको थियो । कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्काले समितिलाई दिएको बयानमा आफूले एसपीलाई पटक–पटक ‘फायर नखोल्न’ भनेर सचेत गराएको उल्लेख गरेका छन् ।
आन्दोलनमा गोली चलाउने प्रहरीले एसपीको आदेशअनुसार गोली चलाएको भनेर समितिलाई बयान दिएका थिए ।
निलम्बित प्रहरी अधिकारी पनि शंकास्पद् भूमिकामा
उच्चस्तरीय छानबिन समितिले निर्मला हत्या प्रकरणमा लिनम्बनमा रहेका एसपी डिल्लीराज विष्टका अतिरिक्त अन्य ५ जना प्रहरी अधिकारीको भूमिका पनि शंकास्पद रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
प्रमाण नष्ट गर्नेदेखि घटना प्रकरणलाई मोड्ने कार्यमा उनीहरूको संलग्नता रहेको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट घटनाको अनुसन्धानका लागि खटिएका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) अंगुर जिसी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका डीएसपी ज्ञानबहादुर सेटी, वडा प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक जगदिशचन्द्र भट्ट, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरको मुद्दाका शाखाका प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) एकेन्द्र खड्का र अस्थायी प्रहरी चौकी सालघारीका प्रमुख प्रहरी सहायक निरीक्षक रामसिंह धामीलाई गृह मन्त्रालयले निलम्बन गरेको थियो । लाेकान्तर
महिलाले कसरी गर्नुपर्छ हस्तमैथुन? महिलाहरुले थाहा पाउनुहोस्
डोटीबाट आयो दुःखद जीप दुर्घटनकाे खबर, २ जना रहेनन्